क्रिप्टो कारोबार योजना त्याग्दै गोल्डम्यान | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय क्रिप्टो कारोबार योजना त्याग्दै गोल्डम्यान
on: September 06, 2018 अन्तरराष्ट्रिय
क्रिप्टो कारोबार योजना त्याग्दै गोल्डम्यान
बिट्क्वाइन ७ हजारभन्दा तल
न्यूयोर्क (अमेरिका) । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैङ्क गोल्डम्यान श्याख्सले क्रिप्टोकरेन्सीका लागि छुट्टै ट्रेडिङ डेस्क खोल्ने योजना त्याग्दै छ । नियामक वातावरण अनिश्चित रहेकाले बैङ्कले क्रिप्टो ट्रेडिङको योजना छाड्न थालेको भन्दै बुधवार बिजनेश इन्साइडरले एक समाचार छापेको हो । विगत १ वर्षदेखि बैङ्कले बिट्क्वाइन र अन्य डिजिटल मुद्राको कारोबार गर्न नयाँ ट्रेडिङ डेस्क लञ्च गर्नेबारे सोचिरहेको थियो । यस क्रममा धेरै काम गर्न बाँकी नै थिए । तीमध्ये धेरै काम त बैङ्कको हातभन्दा बाहिरको कुरा थियो । यसमै अनिश्चित देखिएपछि बैङ्कले योजना त्याग्न थालेको हो ।
यो समाचार सार्वजनिक भएपछि बुधवार बिट्क्वाइनको भाउ घटेर ७ हजार डलरनजीक आएको छ । क्वाइनबेसको तथ्याङ्कअनुसार बिट्क्वाइनको भाउ ५ प्रतिशत घटेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाली समयअनुसार साँझ ८ बजे क्वाइन डेस्कमा प्रतिगोटा बिट्क्वाइनको भाउ ४ दशमलव ४२ प्रतिशत घटेर ७ हजार ३३ डलर ४८ सेण्टमा आएको थियो । बिहान कारोबार शुरू हुँदा क्वाइनडेक्समा बिट्क्वाइनको भाउ ७ हजार ३ सय ५८ डलर ५० सेण्ट थियो । बुधवार यो न्यूनतम ६ हजार ९ सय ३८ डलर १० सेण्टमा पनि आएको थियो ।
गतवर्ष अमेरिकी शेयर नियामक ‘सेक’ले आईसीओमार्फत जारी गरिने केही डिजिटल क्वाइनलाई शेयर मान्न सकिने बताएको थियो । यसको अर्थ ती क्वाइनलाई सङ्घीय शेयर कानून मातहत राखेर कारोबार पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हो । एजेन्सी
तस्वीर : दमकलबाट खानेपानी !
उद्योग मन्त्रालयको भूमिका अर्थ मन्त्रालयको विभाग जस्तो : विनोद चौधरी
२.६३ अंकले बढेको बजारमा कारोबार रकम भने कम, कुन कम्पनीको भयो सर्वाधिक कारोबार ?
लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा रिट दायर
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग : द्विपक्षीय छलफलका लागि चीन प्रस्थान
आगामी मौद्रित नीतिमा समेट्न नेपाल पूँँजी बजार लगानीकर्ता संघको सुझाव
८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने प्रदेश–१ सरकारको दाबी
क्षमता भन्दा तेब्बर यात्रु राख्न थालेपछि यात्रा कष्टकर
तस्वीर: घरका लागि अग्राठको काठबाट टुनाल बनाउँदै कामदार
चोभारमा निर्माणाधीन मञ्जुश्री पार्कमा ढुंगामा बुटा बनाउँदै कामदार